I-Clam Elite, enye indlela nge-ANC ngezilokotho zeFresh´n Rebel | Izindaba zegajethi
I-Clam Elite, enye indlela nge-ANC ngezilokotho zeFresh'n Rebel
UMiguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | General, Izibuyekezo
Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo, okwaziwa kangcono njenge- I-ANC ngesifinyezo sayo esiNgisini, sekube yisicelo sabakhiqizi bemikhiqizo yomsindo esiya ngokuya sihamba phambili osukwini, okwenzekile ngokukhishwa okusha kweFresh'n Rebel, okuyinkampani yokuthi lapha besilokhu siyilandela njalo, ngakho-ke thina angikuphuthelanga ukuqokwa.
Sikukhombisa iClam Elite entsha evela kuFresh´n Rebel, ihedsethi ene-ANC nokunye okuningi okumangazayo kwezobuchwepheshe. Hlala nathi futhi uthole konke odinga ukukwazi ngama-headphone amasha e-Fresh'n Rebel angaphezulu kwezindlebe.
2 Izici zobuchwepheshe nokuzimela
3 Ukukhanselwa komsindo nezindlela
4 Uhlelo lokusebenza lomsindo womuntu siqu nekhwalithi yomsindo
6 Izinzuzo nokuqeda
UFresh´n Rebel uhlala ethembekile kokusemqoka, kokubili ngombala nangezinto zokwakha. Lawa maClam Elite alandela ukuvumelana kwemibala, anikela ngamathoni amnyama, amhlophe naluhlaza okwesibhakabhaka. Ngendlela efanayo, inochungechunge lwamapulasitiki nezinsimbi ezilingisa insimbi. Kodwa-ke, lokhu kubonakala kungakulimazi ukwakhiwa okuphelele, okuzizwa kuqinile nekhwalithi. Ngaphandle kwalokhu, ngenxa yepulasitiki ithuthukiswa ezingeni lokukhanya. Lawa maClam Elite awasindi ngokusetshenziswa okuqhubekayo kokuhlangenwe nakho kwethu.
Kufaka ikhebula le-USB-C eboshwe ngenayiloni
Kufaka ikhebula le-3,5mm Jack kanye nekhebula le-AUX eliboshwe nge-nylon
Kufaka phakathi ukuphatha isikhwama
Ibhande lekhanda lenziwe ngendwangu futhi linolwelwesi lwegwebu lememori ngaphakathi ukwenza kube lula ukulufaka. Ngokusobala sinohlelo oluvamile lwe-telescopic kulolu hlobo lwamahedisethi ukuze kuhlalise ikhanda lethu. Ngokwengxenye yayo, ama-headphone amboze ngokuphelele indlebe anokumboza kwesikhumba kokulingisa, ajikeleze ngenkululeko yokuhamba futhi nawo ayagoqeka.
Kulesi sigaba sithole ipaneli yokuthinta kusizo lokuzwa, kanye nenkinobho yokuvula / yokuvala i-ANC, inkinobho ye-ON / OFF kanye ne-USB-C port esizokhokhisa ngayo ifoni. Isisindo esiphelele singama-gram angu-260 kuphela.
Izici zobuchwepheshe nokuzimela
Ngokusobala, njengama-headphone angenantambo, sinayo i-Bluetooth yokuxhuma nedivayisi, yize singasebenzisa ngokunenzuzo izici zohlelo lwayo lomsindo esizolukhuluma ngalo ngokuhamba kwesikhathi. Kulesi sigaba iClam Elite yeFresh´n Rebel inayo Ukukhanselwa Komsindo Osebenzayo Wedijithali, ukunikela ngomuzwa ophakeme ngokwethiyori. Lokhu kuhambisana nochungechunge lwezindlela esizophinde sikhulume ngazo ngokuhamba kwesikhathi.
Sinembobo ye-USB-C esingakhokhisa ngayo amahedfoni nokuthi Banamahora angama-40 okuzimela ekudlaleni umculo, okuzoncishiswa kube amahora angama-30 lapho senza ukucinywa komsindo kusebenze. Ukukhokhiswa ngokuphelele kwala maClam Elite avela eFresh'n rebelde kuzosithatha cishe amahora amane, ngakho-ke singabona ukuthi asinalo uhlobo oluthile lokushaja okusheshayo. Ngaphandle kwalokhu, ukuzimela kusabalele kangangoba asisiboni isimo esingakudinga kuso. Noma kunjalo, Njengoba sinembobo yeJack 3,5mm, singayisebenzisa ngendlela yendabuko uma kungenzeka ukuthi siphelelwe amandla okuzimela.
Ukukhanselwa komsindo nezindlela
Kulokhu Isihlubuki sikaFresh'n ithathe isinqumo sokwenza ngcono uhlobo lobubanzi beClam ngalolu hlobo lwe- "Elite" futhi ngalokhu isinikeze ukukhanselwa komsindo kwidijithali okuthembisa ukufinyelela kuma-36 dBi. Ekuvivinyweni kwethu kukhombise ukuthi kwanele, okungenani kwimodi yokukhansela yomsindo ephelele. Izinto ziyashintsha lapho sishintshela kwenye imodi.
Ukukhanselwa komsindo okujwayelekile: Izokhansela wonke umsindo ngamandla aphakeme ahlinzekwa yiClam Elite kuze kufike ku-36 dbi
Imodi ye-Ambient: Le modi izokhansela umsindo ocasulayo futhi ophindaphindayo kepha izosivumela ukuthi sithathe izingxoxo noma izexwayiso ezivela ngaphandle.
Endabeni ye-Ambient Mode sibona ukuthi ingawathinta kanjani kakhulu amathoni omculo esiwulalelayo. Yize ime kahle, angizithandi kakhulu izindlela ezinjengalezi 'ezisobala', ukukhanselwa komsindo okusebenzayo kusebenza kahle, futhi ngincoma ukukusebenzisa endaweni ephephile. Noma kunjalo, Uma ucabanga ukuthi imfene zezindlebe zakho zivelele kangakanani, sinezinga elihle lokuhlukaniswa lapho singasebenzisi lesi sici sesoftware.
Uhlelo lokusebenza lomsindo womuntu siqu nekhwalithi yomsindo
Lawa maClam Elite ahambisana nokusebenza okungajwayelekile ukulungiselela uhlobo lomsindo ngohlelo olutholakala mahhala kuzo zombili i-iOS ne-Android. Lapho nje sivumelanisa i-Clam Elite yethu, into elula ngokubamba inkinobho ye-ON / OFF, kuzovulwa uhlelo lokulinganisa oluzohlala cishe imizuzu emithathu futhi olunembile impela. Lapho nje uhlu lwemibuzo seluphelile, kuzonikezwa iphrofayli ku-Clam Elite yethu engeke igcinwe ocingweni kepha kuma-headphone uqobo, ukuthi singabona futhi siguqule noma nini lapho sifuna ngaphandle kokulahlekelwa yilokho kulungiselelwa ngenkathi sikusebenzisa.
Isistimu yepaneli yokuthinta ukuphatha okuqukethwe kwe-multimedia nevolumu
Ukutholwa kokubekwa ukuze kumiswe isikhashana umculo ngokuzenzakalela
Ngokwengxenye yayo, ikhwalithi yomsindo yehluka kakhulu uma sizilinganisile futhi uma kungenjalo. Endabeni yami, ngibonile ukuba khona ngokweqile kwama-bass ngemuva kokulinganisa, ngakho-ke ngithande imodi ejwayelekile, ake sithi zifika zilinganiswe kahle njengezinga elijwayelekile. Asazi ukuthi bane-aptX codec. Basinikeza ukusebenza okuhle kuma-bass naphakathi naphakathi, kusobala ukuthi bahlupheka ngamazinga aphezulu, ikakhulukazi uma sisuka emculweni wentengiso, njengoba kunjalo ngamahedfoni amaningi alolu hlobo. Ukwethembeka komsindo kukhubazeka kancane lapho senza izindlela zokukhansela ezisebenzayo, into ebuye ibe ngaphakathi kwemingcele ejwayelekile.
Sihlangana nalesi sihlubuki seFresh'n umkhiqizo oyindilinga, amandla awo agqamile kwababuthakathaka, ikakhulukazi ngoba ulwazi lokuxhuma, ukuhleleka nokunethezeka kuhambisana nekhwalithi yomsindo, okuthi noma singekho ebangeni le-premium, inikeze izinga eliphakeme ngokwanele kulabo basebenzisi wanelisekile. Intengo yokwethulwa ingama-euro angu-199,99 kumaphoyinti ajwayelekile okuthengisa afana ne-Amazon, i-El Corte Inglés neFnac.
Isilinganiso sezinkanyezi esingu-4.5
Kuthunyelwe ku: 10 Juni ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: 9 Juni ka-2021
Izinto ezicatshangwe kahle nokuklanywa
Kungenzeka ukulungisa umsindo ngohlelo lokusebenza
Ukuxhumana okuhle nesipiliyoni sokusebenza
Imodi ye-Ambient ingathuthukiswa
Banganikeza umuzwa wokuqina okuncane ngenxa yokukhanya
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Clam Elite, enye indlela nge-ANC ngezilokotho zeFresh'n Rebel
I-Amazon Echo Show 10, isikrini, umsindo nokusungula izinto ezintsha, ingabe kufanelekile?
Amawele i-ANC, iFresh´n Rebel iguqula imodeli yayo yempumelelo